हामी उच्च आत्मबलका साथ रेनेगेड्स च्याम्पियन्स लीग खेल्दैछौं : निरज श्रेष्ठ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १० कार्तिक २०७५, शनिबार १५:०४ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा रहेको सांस्कृतिक विविधतामा एकता देखाउने उद्देश्यका साथ आइतबार देखि सुरु हुने मेलबर्न रेनेगेड्स च्याम्पियन्स लीग २०–२० प्रतियोगितामा नेपाली टोलीले प्रतियोगिताको पहिलो दिनको पहिलो खेल बिहान ९ बजे अष्ट्रेलियाको आदिवासी टिमका विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ।
खेलमा नेपाल सहित बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तथा श्रीलङ्का लगायतका टिमहरू रहेका छन्।
नेपालको पहिलो प्रतिद्धन्दी अष्ट्रेलियाको आदिवासी टिमले भने पहिलो पटक यो प्रतियोगितामा भाग लिइरहेको छ।
सुनम गौतमको कप्तानीमा १८ जना स्थानीय क्रिकेट खेलाडीहरूलाई समेटेर तयार भएको नेपाली टोलीले आइतवार हुने पहिलो खेल मात्र होइन प्रतियोगिता नै जित्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।
पार्कभिलको र्यान्सफोर्ड ओभलमा हुने प्रतियोगिताका विजेताले लिग स्तरिय अन्य खेलमा सहभागिता जनाउन पाउने छन्। त्यसैले पनि टिम नेपाल उच्च आत्मविश्वासका साथ मैदान उत्रने तयारीमा छन् ।
हामीसँग उच्च आत्मबल छ : निरज श्रेष्ठ
अष्ट्रेलियाका नेपाली समुदायबीच निकै आशालाग्दा र प्रतिभावान खेलाडीका रुपमा परिचित निरज श्रेष्ठ यसपटक पनि टिम नेपालको बलियो खम्बाका रुपमा रहनेछन् । उनका खेल हेरेका र उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्–निरज श्रेष्ठ विशेष गरेर बलिङलाई प्राथमिकता दिने खेलाडी हुन् । उनी आफ्नो गेम प्लानलाई राम्रोसँग बुझ्नसक्ने,टिमको स्ट्राजिडी राम्रोसँग बनाउन सक्ने र क्याप्टेनसीपको समेत राम्रो दक्षत भएका खेलाडी हुन् । अलराउण्डर खेलाडीका रुपमा परिचित उनी ब्याट्सम्यान र बलर दुवै भूमिकामा सशक्त छन् । त्यसैले यसपटकको प्रतियोगितामा टिम नेपालले मात्र होइन नेपाली समुदायले पनि निरज श्रेष्ठलाई भरपर्दा खेलाडीका रुपमा हेरेका छन् । उनै खेलाडी निरज श्रेष्ठसँग हिमालयन कङ्गारुले गरेको छोटो कुराकानी :
आइतवारदेखि शुरु हुन लागेको मेलबर्न रेनेगेड्स च्याम्पियन्स लीग २०–२० प्रतियोगिताबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
–यो हामी सबैकालागि राम्रो अवसर हो । त्यसैले हामी पूर्ण आत्मविश्वासका साथ तयारी अवस्थामा छौं । राम्रो खेल्छौं र हामी नै जित्छौं भन्ने आशा र आत्मविश्वास दुवै छ ।
तपाई मेलबर्नका नेपाली समुदायले धेरै आशा गरेको खेलाडी हुनुहुन्छ । यहाँको समुदायको खेलस्तर बढाउन के गर्नुपर्ला ?
–त्यसकालागि सबैभन्दा मूख्य कुरा हामी एक हौं भन्ने सामूहिक भावना हुनपर्छ । किनभने एकताको भावना भए सबथोक गर्न सकिन्छ र सफल पनि भइन्छ ।
यसपटकको खेलले नेपाली समुदायको खेललाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
–अहिले नेपाली समुदायका नयाँ नयाँ प्रतिभा र उदीयमान खेलाडीहरु आइरहेका छन् । अर्कोतिर रेनेगेट्स जस्ता प्रतिष्ठित गेमहरु हुन थालेका छन् । यसरी पाएको प्लेटफर्मको सही सदुपयोग गरेर राम्रो खेल खेल्न र प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सक्यौं भने जिल्ला,राज्य र राष्ट्रिय स्तरकै गेमहरुमा छनौट हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । अष्ट्रेलियाका बिबिएल र प्रिमियर लिग जस्ता ठूला र प्रतिष्ठित गेमहरु प्रतिभाशाली खेलाडीहरुकालागि सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म हुन् । त्यसैले क्रिकेटमा अष्ट्रेलियामा सुरक्षित भविष्य छ ।
Previousपार्टीकै चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री आफैं किन गएनन् ?
Nextसस्तियो हवाइ टिकट,१५ सयमै पोखरा
अष्ट्रेलियाको चर्चित डिक स्मीथ स्टोर बन्द हुने,एकैपटक ३ हजार जना बेरोजगार
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०४:४०
अष्ट्रेलियामा पौडिदा पौडिदै छालले लगेर हराए २२ वर्षीय युवक
५ फाल्गुन २०७४, शनिबार १२:१०